'135-yr-old voted in Zimbabwe polls' | News24 Nigeria
'135-yr-old voted in Zimbabwe polls' 06 August 2013, 14:04 Most Read
Cape Town - The oldest person who voted in Zimbabwe's 31
July poll is 135 years old and still serves in the Zimbabwe National Army, zimelections13.com
has claimed in a tweet.
"The oldest person who voted in Zimbabwe's July 31 poll
is 135 years old and still serves in the Zimbabwe National Army", it tweeted. The allegation comes as the outcry over the outcome of the
just ended disputed elections in Zimbabwe continues to
rattle the country and the international community, with the US saying it noted a "number of serious concerns".
Zimbabwe’s incumbent president Robert Mugabe won
overwhelmingly in the polls which have been dismissed as a 'sham' by his
long-time arch rival Morgan Tsvangirai of the Movement Democratic Change.
Tsvangirai and his MDC party are is preparing to mount a
legal and political challenge against the vote that looks set to extend Mugabe's 33-year rule.